Semalt: Mobile ကိုသွား!
စာရင်းအင်းများအရလူတို့သည်မိုဘိုင်းဖုန်းများမှရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်သူတို့ပြုလုပ်သည့်အကြိမ်အရေအတွက်ထက်နှစ်ဆကျော်ရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ကိုင်ဖုန်းတွေကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်လို့ဖြစ်တယ်။ သင်အိမ်တွင်ဖြစ်စေ၊ အလုပ်မှာဖြစ်စေ၊ သွားနေစဉ်ဖြစ်စေ၊ အွန်လိုင်းရှိကွဲပြားခြားနားသောအရာများကိုရှာဖွေရန်သင့်ဖုန်းကိုအလွယ်တကူကိုင်ထားနိုင်သည်။
သင်၏ဖုန်းကိုအီးမေးလ်များကိုတုန့်ပြန်ရန်၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်စကားပြောရန်၊ သတင်းများကိုခြေရာခံရန်၊ YouTube ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုရန်စသည်တို့ကိုသင်သုံးနိုင်သည်။ ဤအရာများနှင့်အခြားအရာများသည်သာမာန်လူတစ် ဦး ကိုသူ/သူမ၏မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအချိန်တိုင်းတွင်စွဲစေသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်သည်ဟုထင်ရသည်။
၁။ ဝက်ဘ်ဆိုက် Mobile-Friendness ဆိုတာဘာလဲ။
မိုဘိုင်းဖော်ရွေမှုဆိုသည်မှာ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု၏ဂုဏ်သတ္တိများဖြစ်ပြီး၎င်းကိုမိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်အလွယ်တကူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ကြည့်ရှုရန်အသုံးပြုသည့်မည်သည့်စက်ကိုမဆိုကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုသင့်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သည်စက်ပစ္စည်းအားလုံးနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိရန်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိပါကသို့သော်၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်သင်ကြည့်ရှုသူအသုံးပြုသည့်ကိရိယာနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တုန့်ပြန်ရန်သင့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်သင့်သည်။ လူအများစုက mobile-friendly website တစ်ခုရှိခြင်းသည်ပစ္စည်းအားလုံးနှင့်အလွယ်တကူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော site တစ်ခုရှိခြင်းဟုထင်ရသော်လည်းမိုဘိုင်းအတွက်လွယ်ကူသည်။
မိုဘိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဆိုက်သည်ပစ္စည်းအားလုံးမှလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်သင့်သည်။ သူ့ရဲ့ပါဝင်မှုပုံစံဟာနှစ်သက်စရာကောင်းသင့်တယ်၊ ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတွေကဘယ်မျက်နှာပြင်ကိုမဆိုသင့်လျော်စွာကိုက်ညီသင့်တယ်။ သင်မိုဘိုင်းနှင့်အဆင်ပြေသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်လိုအပ်သည့်အကြောင်းပြချက်များကိုထပ်မံရှာဖွေရန်ဆက်ဖတ်ပါ။
၂။ သင်၏ဝဘ်ဆိုက်ကို Mobile နှင့်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ခြင်း၏အရေးကြီးမှု
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်မိုဘိုင်းနှင့်အဆင်ပြေသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ဦး စားပေးရွေးချယ်ပါ
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်များကိုအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင်မိုဘိုင်းနှင့်မသက်ဆိုင်သောအရာများထက်ဂူးဂဲလ် algorithms သည်မိုဘိုင်းနှင့်ရင်းနှီးသောဆိုဒ်များကို ဦး စားပေးသည်။ လူအများအပြားသည်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များမှတဆင့် Google ရှာဖွေမှုများကိုပြုလုပ်သောကြောင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များကြည့်ရှုသူများအတွက်လွယ်ကူစွာကြည့်ရှုရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကို Google ကလုပ်ရသည်။ ၎င်းသည် Google algorithms ၏အကူအညီဖြင့်မိုဘိုင်းနှင့်အဆင်ပြေလွယ်ကူသောကိရိယာများကို ဦး စားပေးဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ ယနေ့ခေတ်၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အညီသင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမိုဘိုင်းနှင့်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ကျန်လျှင်သင်သည်လမ်းဘေးတွင်လျင်မြန်စွာကျဆင်းလိမ့်မည်။ သင်၏ဆိုဒ်ကိုဂူဂဲလ်နှင့်အခြားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကရှုတ်ချနိုင်သည်။ ဖောက်သည်များကသင်၏ site နှင့်ဝေးလွန်းသောကြောင့်သင်၏အထွေထွေမြင်သာမြင်သာမှုလျော့နည်းသွားပြီးခြုံငုံကြည့်လျှင်သင်၏ဝင်ငွေကိုထိခိုက်လိမ့်မည်။
လူများသည်များသောအားဖြင့်သူတို့၏ရိုးရိုးအင်တာနက်ရှာဖွေမှုအများစုကိုပြုလုပ်ရန်သူတို့၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုသည်။ အွန်လိုင်းကျပန်းသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေခြင်းမှသည်အွန်လိုင်း ၀ ယ်ယူခြင်းအထိ၊ Quora နှင့် Reddit ကဲ့သို့သောဆိုဒ်များမှအခြားသူများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပြုသည်။ အဘယ်ကြောင့်? ၎င်းသည်လက်တော့ပ်ကိုင်ဆောင်ထားရမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြန်ပြီးလွယ်ကူသည်။ ယခုအခါအွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုအများစုသည်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များဖြင့်ပြုလုပ်သောကြောင့်မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများအတွက်အဆင်မပြေသောဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိခြင်းကလူများအားသင်၏ site သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။
အကြောင်းပြချက်မှာ၎င်းတို့သည်သွားရန် (သို့) နားမလည်ရန်ခက်ခဲသောဆိုဒ်တစ်ခုကိုမသုံးလိုကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်လည်းအသုံးပြုသည်ဆိုလျှင်၎င်းကိုမိုဘိုင်းနှင့်အဆင်ပြေအောင်မလုပ်ပါနှင့်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုလာပြီးမိတ်ဖက်ပြုရန်သင့်ကိုကြိုးစားဆက်သွယ်နေသည်ဟုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ လူတစ်ယောက်သည်လက်မခံသောမိုဘိုင်းနှင့်မသင့်တော်သောလက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောတုံ့ပြန်မှုမရှိသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှဖယ်ထုတ်ခံရနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ လူတစ်ယောက်ကဒီ site ဟာ desktop ပေါ်မှာကြည့်ရတာပိုကောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးမရှိဘူး။ ဒါကပထမ ဦး ဆုံးစှဲအလွန်အရာအားလုံးကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ပြုလုပ်သင့်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များကိုတွန်းအားပေးနိုင်သည်။
ဤအကြောင်းကိုအနည်းငယ်အချက်ကိုယခင်အချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်ပုံမှန်အလေ့အကျင့်ကသူတို့အတွက်မိုဘိုင်းနှင့်အဆင်ပြေစေဖို့ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဤအထူးလက္ခဏာမပါသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်နေရာမရှိတော့ဟုထင်ရသည်။ သူတို့ဟာခေတ်နောက်ကျနေတယ်၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အများစုသည်အပြုသဘောရပ်တည်ရန်ရည်ရွယ်သောဤလျင်မြန်သောဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်သင့်ကိုမစွန့်ပစ်သင့်ပါ။
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အားယုံကြည်စိတ်ချရဖွယ်ရှိစေရန်တုန့်ပြန်မှု၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးသည်ယခုအချိန်တွင်ခေတ်မီပြီးရှုပ်ထွေးမှုရှိမည်ဟုလူအများမျှော်လင့်သောကြောင့်ဤစံနှုန်းနှင့်မကိုက်ညီသောမည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမဆိုစပမ်းများနှင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်များဟုမှတ်ယူနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်၏လက်ရှိဖောက်သည်များ/ဖောက်သည်များနှင့်အလားအလာရှိသောသူများရှေ့တွင်မှန်ကန်စွာယုံကြည်မှုရှိရန်သင့်ဆိုဒ်ကိုမိုဘိုင်းနှင့်အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုသင့်သည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ပြီးသင့်ထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတောင်းခံရန်အားပေးလိမ့်မည်။
Bounce Rate ကိုလျှော့ချသည်
၀ ဘ်ဆိုဒ်များသည်မိုဘိုင်းဖန်သားပြင်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်သည့်အခါလူများသည်ထိုစာမျက်နှာများပေါ်တွင်တွန့်ဆုတ်နေရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းအစားသူတို့သည်အခြားမိုဘိုင်းနှင့်အဆင်ပြေသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုစစ်ဆေးရန် Google ၏မူလရလဒ်သို့ပြန်သွားသည်။ သင်၏အကြောင်းအရာကိုအမှန်တကယ်တန်ဖိုးထားသော visitors ည့်သည်များအနေဖြင့်ထိုနည်းအတိုင်းစာဖတ်ခြင်းကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အရေးမကြီးဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။
သူတို့ရဲ့မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်တွေကိုကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေကသူတို့ကိုစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေမယ့်ဘယ် site ကိုမဆိုအချိန်သိပ်မပေးကြဘူး။ ဆိုက်ကသူတို့လိုချင်တာကိုမပေးရင်၊ သူတို့သည်အခြား site တစ်ခုသို့မသွားမီအချိန်ဖြုန်းကြသည်။ ပြီးတော့မင်းဆိုလိုတာကမင်းသိလား သင်၏ဆိုဒ်သည်တစ်ဟုန်ထိုးမြင့်မားသောနှုန်းကိုမှတ်တမ်းတင်လိမ့်မည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မြင့်တက်သောနှုန်းများကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းက Google algorithms ကိုသင့်ဆိုဒ်သည်ဆီလျှော်မှုမရှိကြောင်းနှင့်ရှာဖွေသူများအားကမ်းလှမ်းရန်ခိုင်လုံသောအချက်အလက်များမရှိဘဲထင်မြင်စေလိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်၏ရှာဖွေမှုရလဒ်ကိုထိပ်ဆုံးရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုရှာဖွေသူများအားအစေခံနိုင်သည့်အခြားဆိုဒ်များသို့ ၀ င်ရောက်စေရန်သင့်အား page ကဖျက်ဆီးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအနိမ့်ဆုံးနိမ့်ဆုံးနှုန်းအတိုင်းဆက်လက်ထားရန်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအခြားသူများနှင့်အဆင်ပြေအောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
၃။ လွယ်ကူသောမိုဘိုင်းကြည့်ရှုနိုင်မှုနှင့်အသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမည်သို့အကောင်းဆုံးအောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်ရမည်နည်း
ရိုးရှင်းသောတိုးတက်မှုမှရှုပ်ထွေးသောနည်းပညာဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုသို့သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမိုဘိုင်းနှင့်အလွယ်တကူဖြစ်စေရန်သင်လုပ်နိုင်သမျှများစွာပြုလုပ်သင့်သည်။ သင်၏ site ကိုကိရိယာအားလုံးနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရန်သင်သတိထားရမည့်အရာ (၅) ခုရှိသည်။
သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအတွေ့အကြုံရှိသော developer များသာရှိသည်
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုဖန်တီးရန်သာလိုပါကမိုဘိုင်းနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုသည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသောအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသေချာစေသင့်သည်။ ၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်နာများအားလုံးသည်ထိပ်တန်းအဆင့်မြင့်မိုဘိုင်းနှင့်ပတ်သတ်သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကိုမဖန်တီးနိုင်ကြောင်းသင်သိသင့်သည်။
သင် ... သင့်တယ် Semalt ကိုဆက်သွယ်ပါ အလွန်အမင်းလည်ပတ်မှုနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုရှိသော်လည်းအသုံးပြုသူများအတွက်လွယ်ကူသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖန်တီးရန်သင့်အားကူညီသည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါက၎င်းကိုမိုဘိုင်းနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အားနည်းပညာဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန် Semalt ကိုဆက်သွယ်သင့်သည်။
မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များမှတဆင့်အင်တာနက်ကိုကြည့်သောအခါလူအများစုသည်ပေါ်ပေါက်လာသူများအတွက်စိတ်မရှည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ အာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းနှင့်အချိန်ကုန်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Pop-ups များသည် desktops နှင့် laptop များပေါ်တွင်သာမကဖုန်းများပေါ်တွင် မူတည်၍ အရေးမပါပုံရသည်။ လူအများစုကသူတို့မခံရပ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်သင်ကသင့်ရဲ့ site ကို Pop-ups ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်လုံးဝလိုအပ်သောနေရာတွင်သာအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ site ကို mobile-friendly ဖြစ်သင့်သည်။
ကြော်ငြာများသည်သင်၏ဆိုဒ်မှတဆင့်ငွေရှာရန်အတွက်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းတို့သည်သင်၏ site ကိုပါထိခိုက်စေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ပိုလျှံနေသည့်ဆိုဒ်များအတွက် pop-ups ကဲ့သို့ကြော်ငြာများသည်စိတ်ရှုပ်စရာ၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သူတို့ကသင့်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုနှေးစေတယ်၊ ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူအတွက်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ရှိကြော်ငြာအရေအတွက်ကိုကန့်သတ်ရန်ကြိုးစားသင့်သည်။
လူများသည်အထူးသဖြင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများသုံးသည့်အခါ၎င်းကိုဖွင့်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်အချိန်များစွာမဖြုန်းနိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင်၏ဆိုဒ်သည်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်လျှင်၊ သူတို့သည်မြန်စွာထွက်ခွာသွားပြီးသူတို့ရှာဖွေသည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုရယူရန်နောက်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏မြန်နှုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်သင်ကြိုးစားသင့်သည်။ သင့် site ၏ loading speed ကိုစမ်းသပ်ရန် Semalt ၏မြန်နှုန်းဆန်းစစ်မှုကိုသုံးနိုင်သည်။ ထို့အပြင် Semalt ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အထူးကုများကအသုံးပြုသူများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်သင်၏ site ပေါ်တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုမိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်၎င်းသည်ပါ ၀ င်သည့်ပစ္စည်းများအားလုံးတွင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းအောင်သေချာအောင်ပြုလုပ်သင့်သည်။ စာသားသည်သိပ်ကြီးလွန်းလွန်းလွန်းလှသည်မဟုတ်ပါ။ စာပိုဒ်များသည်သင့်တော်သောအကွာအဝေးနှင့်အတော်လေးတိုသင့်သည်။ Display အရောင်ဟာလိုအပ်တာထက်ပိုမိုပေါ့ပါးသင့်ပါတယ်။ ဤအရာအားလုံးကိုစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများနှင့်လက်တော့ပ်များတွင်သတိမမူဘဲနေနိုင်သော်လည်းမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များတွင်မူ၎င်းတို့ကြည့်ရှုနိုင်သည့်ဆိုဒ်နှင့်ထူးခြားမှုမရှိသည့်ဆိုဒ်များအကြားကွာခြားမှုရှိနိုင်သောကြောင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များတွင်အလွန်အရေးကြီးသည်။
အွန်လိုင်းပေါ်မှအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုရန်မိုဘိုင်းပစ္စည်းများကိုအသင့်တော်ဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်၊ ထို့ကြောင့်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုထိုငွေနှင့်ကိုက်ညီစေရန်သင့်တော်သင့်သည်။ , ည့်သည်များ၏ဖုန်းနံပါတ်များ၊ တက်ဘလက်များ၊ အိုင်ပက်ဒ်များမှတဆင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလျစ်လျူရှုရန်မကြိုးစားပါနှင့်။ သင်၏ SEO ကိုတည်ဆောက်ရန်မည်မျှပင်ကြိုးစားပါစေမိုဘိုင်းနှင့်မသင့်တော်သောသွင်ပြင်ကိုလျစ်လျူရှုပါကသင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်သက်ရောက်မှုကြောင့်အပျက်သဘောသက်ရောက်လိမ့်မည်။ ဒီတော့ဘာကြောင့်သင့်ရဲ့ A- ဂိမ်းကိုဝက်ဘ်ဆိုက် mobile-friendly? သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အားမိုဘိုင်းအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်နှင့်အထက်ပါအချက်များအားအသုံးပြုရန်ကြိုးစားပါ။ ဒါ့အပြင်သင်နှစ်သက်တဲ့အကောင်းဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုရဖို့ Semalt ကိုဆက်သွယ်ဖို့သတိရပါ။